Muuse Suudi Yalaxoow oo khudbadii ugu yaabna badneyd ka jeediyay xaflad ka dhacday Nairobi (DAAWO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Muuse Suudi Yalaxoow oo khudbadii ugu yaabna badneyd ka jeediyay xaflad ka dhacday Nairobi (DAAWO)
Xildhibaan Muuse Suudi Yalaxoow oo ka tirsan xildhibaanada Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa weerar qaraaxo leh ku qaaday dhalinayaradda xildhibaanada qurbe joogto ah ee ka midka ah baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Muuse Yalaxoow oo hadal kooban ka jeediyay xaflad ka dhacday magaalada Nairobi islamarkaana lagu taageerayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in dhalinyarada ay fiican yihiin hadii aanay musuq-maasuq soo kordhin lacagta ay dalka ka qaadaanna dib ugu celin dibadda.
“Waxaan soo dhaweeynaa madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha uu magacaabay, waxaan aad iyo aad labada gole ee baarlamanka uga mahadcelinaa sida wanaagsan oo ay nin madax ah usoo saareen, dhalinyaradda hadii aysan musuq-maasuq nagu soo kordhin, dalku waa dhismaa” Sidaas waxaa yiri Xildhibaan Muuse Suudi Yalaxoow.
Dhinaca kale, Xildhibaan Muuse Suudi Yalaxoow ayaa ka hadlay waxyaabaha horyaala hogaanka dalka oo ay ka mid yihiin mideynta guud ahaan dalka Soomaaliya ee cashuurta dekedaha, ciidamada iyo arrimo kale oo muhiim ah.
Ugu dambeyntii, Xildhibaan Muuse Suudi Yalaxoow ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismayaasha iyo mashaariicda ka socda dalka Soomaaliya, hadii kale aysan hadhow fursad ka heli doonin.